​भूकम्पका कारणले भक्तपुर नगरपालिकाको राजस्व एक्काइस करोडले घट्यो
भक्तपुर । गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आउँदा भक्तपुर नगरपालिकाको २१ करोड बढी राजस्व घटेको छ । पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेपछि नगरपालिकाले पर्यटन..
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक – सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक-आर्थिक विकासलगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा वन क्षेत्रको..
नेताको गाडीलाई ओभरटेक गर्दा गोली हानी हत्या
गया । भारतको बिहारमा जनता दल युनाइटेड ९जेडीयू०का नेताको गाडीलाई ओभरटेक गरेको भन्दै एक १९ वर्षीय किशोरमाथि गोली हानी हत्या भएको छ। एनडीटीभीका अनुसार व्यवसायीका छोरा आदित्य सचदेव स्विफ्ट कारमा..
​दैनिक १ करोड रेमिटान्स भित्रिन्छ रुकुममा
रुकुम । रुकुममा दैनिक रु एक करोडभन्दा बढी विप्रेषण ९रेमिटान्स०भित्रिने गरेको छ । मलेसिया, साउदी अरब, कतार, बहराइन, हङ्कङ, सिङ्गापुरलगायत मुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ कार्यरत रुकुमेलीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकाले यहाँ दैनिक..
सरकारविरुद्ध लागेको भन्दै भारतका लागि नियुक्त राजदूत उपाध्याय फिर्ता
काठमाडौं । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन बमोजिम उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने..
​त्यसो भए समाप्त हुन्छ त पृथ्वीमा जीवन ! कुन ग्रहमा छ जीवनको सम्भावना ?
काठमाडौं । पृथ्वीमा जीवन छ किनभने जीवन अनुकुल वायुमण्डल छ अनि पानी पनि छ । जीवनको लागि वायुमण्डल हुनु जरुरी छ । लामो समयदेखि मानिसले पृथ्वीबाहेक ब्रम्हाण्डका अन्य स्थानमा समेत..
​सरकारले किन रोक्यो ? राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण
काठमाडौं । छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा जान लागेकी राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको भ्रमण रद्द भएको छ । वैशाख २६ गते ब्यबस्थापिका संसदमा सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर २७..
​सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेकोबैठकले सरकारबाट व्यवस्थापिकामा राष्ट्रपति मार्फत प्रस्तुत गरिनेआव २०७३-०७४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको आगामी नीति..
​फेरि अर्को सामाजिक क्रान्ति: लमजुङमा बन्यो दलित होमस्टे
लमजुङ । विसं २००६ मा ब्राह्मणका छोराले पनि हलो जोत्नुहुन्छ भनेर हलो क्रान्ति भएको लमजुङमा फेरि अर्को सामाजिक क्रान्ति भएको छ। जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि कैयौँपटक सहभोज गर्दासमेत जातीय छुवाछूतको भावना..
​एनसेल कर प्रकरण संसदमा, संलग्नहरुको पनि छानविन हुनुपर्ने माग
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा अधिकांश साँसदहरुले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर बुझाएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन् । एनसेलको विदेशी लगानीकर्ताहरुबीच नेपाल बाहिर भएको भनिएको स्वामित्व..
​अर्को साता ५ अर्ब ऋण उठाउँदै केन्द्रीय बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साता ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भएको छ । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ठूलो परिमाणमा निक्षेप खरिद..
​नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २६ गते र बजेट जेठ १५ गते, यस्तो छ संसद सचिवालयको कार्यसूची
काठमाडौं । सरकारले आगामी आव ०७३-७४ को नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २६ गते सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयले चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मुख्य कार्यक्रम र त्यसका लागि..
​उच्चमावि नपढेको व्यक्ति पत्रकार बन्न नपाउने प्रस्ताव
चितवन । नेपाल पत्रकार महासंघले एसएलसीमात्र गरेका व्यक्तिले पत्रकार बन्न नपाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । मंगलबारदेखि चितवनको रत्ननगरमा हुन लागेकोे विधानसभामा उक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको पत्रकार..
​रानीपोखरीको पुनःनिर्माण गर्न समस्या
काठमाडौँ । रानीपोखरीको बीचभागमा रहेको म्युजिकल फाउन्टेन पानीको फोहोराका कारण पानी निकाल्ने काम हुन नसक्दा तत्काल पुनःनिर्माणको काम स्थगित भएको छ। चार दिनदेखि पोखरीको पानी निकल्ने काम सुरु भएपनि बीच भागमा..
रक्सी खाएर सधै पिट्थ्यो, मैले हात उठाएको दिन नै उ मर्यो
अन्जली रम्तेल काठमाडौं । ‘मेरा श्रीमान जीउँदै छन्न तर मलाई उनको हत्या गरेको आरोपमा जेल हालिएको छ ।’ घरायसी झगडाका बेला घाइते भएका श्रीमान्को हत्या प्रयास गरेको आरोपमा जेल पुगेकी काभ्रेकी..
बाँदर धपाउनेलाई गाँउलेले मासिक तलब २५ हजार दिए
गोरखा । बाँदरले दुस्ख दिन थालेपछि केरौँजाका किसानले मकै नभित्र्याउने वेलासम्मका लागि तलब दिएर बाादर धपाउन मान्छे राखेका छन्। केरौँजा–५ र ६ का किसानले मासिक २५ हजारका दरले तलब दिने..
५० जना 'विद्युत चोर' पक्राउ
गौशाला । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महोत्तरी जलेश्वर वितरण शाखाले ५० जना विद्युत् चुहावटकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। महिनौँदेखि जिल्लाको विभिन्न गाउँठाउँमा विद्युत् चोरी गर्दै आएका ५० जनालाई पक्राउ गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण..
​मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्म रेल, कोही नेपाली भोकै मर्नुपर्दैन : प्रमको नयाँ आश्वासन
काठमाडौँ । धरान नगरको सातौँ नगर अधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही नयाँ आश्वासन दिएका छन् भने केही पुराना आश्वासनलाई नयाँ रुपमा ब्रान्डिङ गरी बाँडेका छन्। उनले दिएका केही..
मेलम्ची । इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेले शुक्रबार अपराह्न १८ किलो सुनसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । तातोपानीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बा ९ च १४६३ नंको कार जाँच गर्दा गाडीको डिकीमा..
बिर्तामोड । ‘त्यही प्रहरी आएर हामीसँग यौन सम्पर्क गर्छ, त्यही प्रहरीले समाएर लान्छ अनि कुरो मिलेपछि त्यही प्रहरीले छाडिदिन्छ,’ एक युवतीले आफ्नो पीडा टुंग्याउन नपाउँदै अर्कीले थपिन्, ‘थाकेका हुन्छौं, गलेका..
​प्री–बजेटअगावै नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य
काठमाडौं । सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्री–बजेट) माथिको छलफलअगावै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्री–बजेटमथिको..
सरकारले गरेका ५ सय नियुक्ति खारेज गर्न अख्तियारको सिफारिस, को को पर्लान? खारेजीमा
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले गरेका सयौं राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। अख्तियारले आजै निर्णय गरी गैर कानुनी रुपमा नियुक्त सिफारिस भएकाहरु खारेज गर्न पत्राचार..
​भुकम्प पिडित टहरामा भोकै, गोदामको चामल खाल्डोमा
सिन्धुपाल्चोक । सदरमुकाम चौतारानजिकै स्थानीय मेलचौर भन्ने स्थानमा भूकम्पपीडितका लागि खाद्यान्न सहयोगका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमको ठूलो गोदाम छ । कार्यालयसँगै जोडिएको स्थानीय रीता दंगालको अस्थायी टहरो छ । दंगालको..
सल्यानमा एकै घरका ४ जनाको हत्या
सल्यान । गएराति सल्यानमा एकै घरका चार जनाको हत्या भएको छ । छायाक्षेत्र ९ रानागाउँ निवासी रमेश खान ठकुरीकी २३ बर्षीया श्रीमती सीता खान ठकुरी, छोरीहरु ३ बर्षीया पवित्रा खान ठकुरी..
व्यापारीको सुनचाँदी लुट्ने असईसहित दुई प्रहरीलाई कारबाही
काठमाडौँ । गत वैशाख ६ गते लहानस्थित विकास ट्रेडर्सबाट न्यू राज्यलक्ष्मी ज्वेलर्स राजविराजका कामदार मो नसिमले २० भरी (तोला) सुन, पाँच केजी चाँदी र ११ थान सुनको सिक्री बोकेर ल्याइरहेका..
​वीरगन्ज भन्सारमा राजश्व असुली लक्ष्य ३० अर्ब घट्यो
वीरगन्ज । वीरगन्ज भन्सारले राजश्व असुली लक्ष्य घटाएको छ । भन्सार विभागले गरेको निर्णय अनुसार वीरगन्ज भन्सारको बार्षिक राजश्व असुली लक्ष्यमा ३० अर्ब रुपैयाँले घटाइएको हो । मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र..
सगरमाथा चढ्न खोज्दा जागिरबाट निकालिए दृष्टिविहीन
नारायण ढुङ्गाना चितवन । सगरमाथा चढ्न खोज्दा एक दृष्टिविहीनले भइरहेको जागिर नै गुमाउनुपरेको छ। जागिर गुमाएरै भएपनि सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रयासमा जुट्ने व्यक्ति हुन् बागलुङ कुवा गाविस–२ मादीका ३२ वर्षीय अमित केसी..
२ लाख अनुदान पाउने घरधनीको नाम सार्वजनिक, ३ लाखले पाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका ११ जिल्लाका ३ सय ८३ गाविसमा अनुदान पाउनयोग्य घरधनीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनुदान पाउनयोग्य..
​पशुपति क्षेत्र मै हुन्छन् यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लिच्छवीकालदेखिको ऐतिहासिक महत्व बोकेको पशुपति गौशालास्थित भण्डारखालमा गत वर्षको भूकम्पले पर्खाल भत्किएपछि ट्यापे, गँजडी र अश्लील क्रियाकलापमा रमाउने जोडीको केन्द्र बनेको छ । भूकम्पअघि पनि..
एके–४७ हतियारसहित पाँच भारतीय प्रहरी डोटीबाट पक्राउ
भीमदत्तनगर । भारतको पञ्जाबबाट अपराधी खोज्न भन्दै हिँडेका भारतीय प्रहरी निरीक्षकसहित पाँच जना भारतीय प्रहरी सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीबाट आइतबार बिहान पक्राउ परेका छन्। पश्चिमी नाका गड्डाचौकी भएर हतियारसहित सादा पोसाकमा..
Results 1994: You are at page 50 of 67